Ny hatsembohana mahatsiravina dia miteraka fikorontanana goavambe avy any Espana ka hatrany Sina ary any ankoatr'izay
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny lamaody » Ny hatsembohana mahatsiravina dia miteraka fikorontanana goavambe avy any Espana ka hatrany Sina ary any ankoatr'izay
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana China • Kolontsaina • Vaovao momba ny lamaody • Vaovao • Vaovao Mafana Espaniola • Vaovao farany momba ny UK • Etazonia Vaovao Vaovao
Sweatpants manafintohina - Sary natolotry ny balenciaga.com
Ny pataloha pataloha volondavenona dia miteraka bruhaha satria maro no milaza fa manavakavaka sy manavakavaka ny endriny. Aza hadino mihitsy fa 1200 $ ny mpivady iray. Miharihary fa tsy dia mahasosotra izany.
Fa raha Amerikanina Mainty ianao, ny fivarotana mpivarotra toy izany dia mety hoheverina ho manafintohina.
Ahoana ny amin'ireto akanjo pataloha manokana ireto izay manosika olona maro diso lalana?
Moa ve ny tantara manazava ny fihetsika raisin'ny sasany amin'ny mpanamboatra akanjo amin'ny fanapahan-keviny hivarotra ireo pataloha ireo, manazava ny korontana ara-tsosialy?
Inona no mahatonga ny pataloha pataloha hanafintohina izaitsizy? Andao hiverina amin'ny tantara kely hanazavana izany.
Ny endrika dia maka endrika lamaody anaovan'ny olona fohy pataloha fohy avy amin'ny andilany ary mahatonga azy io ho akanjo iraisana, midika izany fa ao anatiny.
Ity fehezan-damaody ity dia nanomboka tamin'ny taona 1990, indrindra tamin'ilay hira mozika hip hop Kriss Kross izay nanao pataloha - aoriana - teo ambanin'ireo mpiady totohondry izay tsy natsangana, saingy nahomby izany. Tsy ny pataloha mihemotra fa ny pataloha mihetsiketsika miaraka amin'ireo mpiady totohondry mampiseho ampahany.
Vetivety dia lasa marika lamaody ho an'ny tanora amerikanina mainty izy io. Tamin'ny taona 2000 anefa, nisy fanjakana amerikana sasany nandany lalàna mandrara ny fanaovana fitafiana toy izao, saingy nilaza ny mpitsikera fa manavakavaka tsy ara-drariny an'ireo mainty hoditra.
Ny sasany tamin'ireny lalàna ireny dia nesorina satria hitan'ny Vondron'olontsotra sivily amerikana fa ohatra, tany Shreveport, Louisiana, ny lalàna dia nampiasa io lalànan'ny pataloha saggy io ho fitadiavana olona mainty sy hikaroka ary mety hanagadra azy ireo.
Mankanesa any amin'ny ampahany manavakavaka
Ka rehefa nametraka ny roa tamin'ireo mpanao ady totohondry natsofoka tao anaty pataloha ny tsipika Trompe L'Oeil ilay mpamorona lamaody avo lenta Balenciaga, dia tsy ny vidin'ny sticker $ 1,190 izay nahatafintohina ny olona, ​​na dia tao amin'ny twitter aza ny sasany niampanga ny mari-pamantarana avo roa heny ary nametra-panontaniana momba ny vidin'ny pataloha.
Ny nolazain'ny mpampiasa TikTok iray dia ny hoe «mahatsiaro manavakavaka» ny pataloha satria mandrovitra ny kolontsaina Mainty. Ity TikTok manokana ity, teny an-dalana, dia hita in-1.6 tapitrisa mahery tamin'ny farany. Rehefa hitan'ny mpampiasa TikTok, Mr200m, ny akanjo pataloha Balenciaga amidy any Londres ary nandefa horonantsary, dia nisy olona re fa: “Tena manavakavaka izany… Namboarin'izy ireo ny mpanao ady totohondry ao anaty pataloa,” izay nisy naneho hevitra hoe: ”
Misy ny hafa na dia nilaza aza fa tsy hitan'izy ireo ho fanavakavahana ny akanjo pataloha. Ny fanehoan-kevitra iray dia nilaza fa ny fanjairana boxer amin'ny pataloha dia zavatra mahazatra tamin'ny taona 90.
Sary natolotry ny balenciaga.com
Mamaly i Balenciaga
Nilaza i Balenciaga fa matetika izy ireo dia nanambatra ny akanjon'akanjo tao anaty akanjo tokana ary nanonona ohatra izay misy ny “pataloha jeans misy sosona amin'ny pataloha akanjo [sy] lobaka akanjom-bokotra nopetahany takelaka”, hoy ny fanazavan'ny Chief Marketing Officer, Ludivine Pont. "Ireo pataloha Trompe L'Oeil ireo dia fanitarana an'io fahitana io."
Rehefa mijery ny tranonkala Balenciaga, tena manana zavatra hafa mitambatra fitafiana hafa toy ny Knot Sweatpants miaraka amina akanjo ba mifatotra mifatotra am-bava… $ 1,250. Ilay pataloha lava mety hanafintohina, raha ny fanazavana, toa nanjavona tsy hita tampoka tao amin'ny tranonkala.
Tantara misimisy kokoa hodinihina
Ny tena niavian'ity fanambarana lamaody ity amin'ny pataloha milomano dia tena manana tantara maizina. Nanomboka izany rehefa nandevozina voalohany tany Amerika ny mainty ary nalaina tamin'ny fomba amam-panao antsoina hoe "buck busting" na "buck breaking." Na dia niresaka tamina soavaly dia aza ireo teny ireo tany am-boalohany, ireo tompona toeram-pambolena atsimo dia nampiasa ireo andianteny ireo mba hilazana ihany koa ny fomba "famakiana" andevo lahy mainty manohitra.
Ireo lehilahy mainty hoditra ireo dia hoentina any amin'ny toerana misy ny besinimaro izay nanolorana ny mpanompo rehetra niambina satria nasaina nampidina ny patalohany izy ary niondrika. Ny "tompo" dia hanolana an-kerisetra an-dehilahy ary handray ny fehikibony avy eo mba hanadinana ny pataloha. Izany no nahatonga azy ho mariky ny "rovitra" na "vaky" hidina hanakanana ny andevo hafa amin'ny fihetsika manohitra.
Tsy vao izao ny mpamorona lamaody iray no nihoatra ny fari-pitondran-tena. Taona vitsivitsy lasa izay, nampiditra an'i Loewe ny mpamokatra lamaody mihaja lamaody Loewe a lobaka mainty sy fotsy ary pataloha napetraka (miaraka amin'ny lobaka irery no ivarotany $ 950) ao anatin'ny fanangonana kapsily manokana. Izy io dia nofaritana fa avy amin'ny aingam-panahy avy amin'ny seramista anglisy William De Morgan tamin'ny taonjato faha-19.
Niteraka resabe avy hatrany anefa ilay akanjo rehefa nilaza ny olona fa tsy mahazo aina loatra izy io mitovy amin'ny fanamiana fanaon'ireo voafonja ao amin'ny toby fitanana nazia nandritra ny Ady Lehibe Faharoa.
September 16, 2021 ao amin'ny 18: 41
Iza no hividy pataloha hatsembohana $ 1200, hafa noho ny fiaraha-monina champagne, sosialista champagne, izay mivavaka amin'ny fako ghetto, nefa tsy mitsitsy vola handany lavitra azy ireo araka izay tratra?